Handefa hafatra an-telefaona amin'ny finday mahery! | Martech Zone
Saturday, May 3, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
wirefly tato ho ato dia nanao fitsapan-kevitra momba ny mpampiasa finday ary nahita fa 64% amin'ireo mpampiasa finday dia tsy mampiasa hafatra an-tsoratra. Rehefa nikaroka momba an'ity lahatsoratra ity aho dia gaga fa nisy tranokala vitsivitsy tohina ny isa.
Angamba mpampiasa taloha aho noho ny bilaogera sasany naneho hevitra, fa gaga aho noho ny antony hafa. Gaga aho fa 65% ny mpampiasa raha ny marina nanao mampiasa hafatra an-tsoratra. Angamba tsotra izao fa feno 40 taona aho fa… marina? Izany dia toy ny tohina fa 35% n'ireo mpampiasa telefaona tsy nampiasa ilay masinina telegrafy mihitsy.
35 isan-jaton'ny mpampiasa finday no tsy mandefa hafatra satria hitan'izy ireo fa tena afaka izy ireo miteny ao anatin'io boaty mora ampiasaina kely io miaraka amin'ilay olona any am-pita. Ary tsy mila manenjana ny ankihiben'izy ireo vao afaka manao izany. Mazava ho azy fa mety ho mora ampiasaina ny mandefa SMS raha te hisaraka amin'ny olona iray ianao nefa tsy te hiresaka aminy akory.
Manesoeso aho mazava ho azy, tiako ny mandefa SMS. Ny zanako dia mandefa hafatra amin'ny namany tsy misy farany ary mankasitraka aho rehefa mandefa hafatra amiko any am-pivoriana fa tsy miantso ahy. Tsy dia manelingelina firy ny fandefasana hafatra ary vetivety dia haingana. Ary mirongatra izao.
Sahirana ny orinasa amin'ny zavatra hatao amin'ny finday efa elaela izao. Ny buzz ao amin'ny indostrian'ny serivisy sakafo dia ny fomba fandraisan'ny olona ny valiny sy fampandrenesana miorina amin'ny lahatsoratra. Nihaona tamin'i Adam Small, filohan'ny Lahatsoratra avy amin'ny Request, androany maraina ary i Adam dia nanamboatra tononkalo tamin'ny zavatra mampientam-po tokoa izay midina amin'ny fantsona.
Ny Text by Request dia efa misy fampiasana finday mahaliana. Ny iray amin'izy ireo dia manome ireo mpampiasa Marathon ny fotoanany farany amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo hafatra amin'ny laharana fisoratana anarana. Tsy mila miandry mandra-pahatonganao any an-trano hijery ny fotoana amin'ny PC-nao!
Adam dia nanohy nanazava ny SMS vs. MMS. Aiza SMS (Serivisy hafatra fohy) mamela ny litera 160 halefa sy miverina, MMS (Serivisy fandefasana hafatra multimedia) mamela ny sary, horonantsary ary ny feo halefa hatrany hatrany.
Rehefa manatsara ny tambajotran'izy ireo ny mpamatsy finday ho an'ny hafainganana (oh 3g, nadika = taranaka fahatelo) ary ny telefaona finday dia manohy manatsara ny efijery misy fanapahan-kevitra avo kokoa, ity dia afaka manokatra ny tsena tokoa!
Raha tokony handefa sms any atosiho ny trondro amin'ny sakafo atoandro, angamba azonao atao ny mandefa horonantsary fohy avy amin'ny mpitantana am-perinasa na horonantsary mahafinaritra amin'ilay lovia ihany! Azonao atao ihany koa ny mandefa coupon namboarina amin'ny fampiasana ny farany amin'ny haitao barcode mba hahafahan'ny mpivarotra manofahofa mpamaky eo alohan'ny telefaona hanavotana ny tapakila.
Nizara teknolojia manaitaitra fanampiny i Adama tamiko izay tsy mbola nahazo alalana hizara eto (mbola), saingy manantena ny hahita sy hampiasa aho.
Tokony ho Maimaim-poana ve ny fandefasana hafatra?
Nanontany an'i Adam aho raha mieritreritra izy fa hiova ny vidin'ny fandefasan-kafatra eto Etazonia (matetika dia maimaim-poana ny fandefasana hafatra any ivelany) ary nilaza izy fa tsy manantena izany. Ny fijerena ny habetsaky ny spam ao anaty boaty dia manazava ny antony… raha tsy mitaky vola ny fandefasana hafatra, dia ho feno ny telefaonintsika rehefa miteny isika!
Tags: finday-barotrafinday smsSMSsms marketingmarketing amin'ny smsny SMS
May 3, 2008 ao amin'ny 11: 58 PM
May 4, 2008 amin'ny 6: 55 AM
May 4, 2008 ao amin'ny 3: 52 PM